पतिले अप्राकृतिक मैथुन गर्न बाध्य पारे : संगीता गुप्ता
असार ३ गते रिपोर्टर्स क्लवमा पत्रकार सम्मेलन गर्न आउँदा संगीता गुप्ता निकै डराएको र हडबडाएको मुद्रामा थिइन् । उनी घरिघरि ढोका बाहिर हेर्थिन् । नेपाली भाषा राम्रोसँग बोल्न र बुझ्न नसक्ने संगीताले हिन्दीमै आफूमाथिको अन्याय अत्याचारका श्रृंखला सुनाइन् । पूर्व कानून मन्त्री एवं वर्तमान संविधानसभाका सदस्य बृजेशकुमार गुप्ताले भने अनुसारको दाईजो नल्याएको भन्दै आफूमाथि निरन्तर हिंसा र यातना दिएको संगीताको भनाइ थियो ।
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महासचिव समेत रहेका संसदीय दलका उपनेता गुप्ताले संगीतालाई मार्न व्यवसायिक किलरहरूलाई प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, तिनै संगीतासंग गरिएको कुराकानीका सम्पादित अंश :-
० आफ्नै पति विरुद्ध किन सार्वजनिक रुपमै उत्रिनु भएको हो ?
वास्तवमा मैले धेरै वर्षसम्म अन्याय, अत्याचार र यातना सहेँ । उहाँको (पति बृजेश गुप्ता)को सामाजिक र राजनीतिक प्रतिष्ठामा कुनै आँच नआओस् भनेरै मैले चुपचाप अन्याय सहें । तर, जति अन्याय सहँदै गएँ उतिनै ममाथिको यातना, दुव्र्यवहार र अन्याय बढ्दै गयो । मिलेर बस्नका लागि धेरै प्रयास पनि गरें । कानूनी कारवाहीका लागि प्रहरी प्रशासनमा निवेदन पनि दिएँ । तर, उहाँले आफ्नो पद र शक्तिको पहुँच प्रयोग गर्दै मलाई कतै पनि न्याय पाउने अवस्था दिनु भएन । मेरो उजुरी समेत दर्ता भएन । कहीँबाट केही उपाय नलागेपछि बाध्य भएर मैले पत्रकार गुहार्नु परेको हो ।
० महिला हिंसा सम्बन्धी उजुरी त प्रहरीले जसरी पनि लिनु पर्छ नि, किन तपाईको उजुरी दर्ता भएन ?
मैले कपिलबस्तुको इलाका र जिल्ला प्रहरी सबैतिर उजुरी दिन खोजें तर दर्ता भएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि मेरो कुरा सुनुवाई भएन । मेरो पीडा सुन्न सरकारका मान्छेहरू कोही तयार भएनन् । मैले तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरूलाई पनि ममाथि भएको यातनाको बारेमा सुनाएको हो, तर उहाँहरूले त उल्टै मलाई आरोप लगाउनुभयो । यी मधेशवादी पार्टीहरू सामन्तहरूका पार्टी हुन् । यी पार्टीका नेताहरूका घरमा महिलामाथि घरेलु हिंसामात्र होइन चरम रुपका यौन दुव्र्यवहार पनि हुन्छन् ।
मलाई उनले अप्राकृतिक मैथुन गर्न पनि बाध्य पारे । एक प्रकारले भन्ने हो भने मलाई उनले पटक पटक बलात्कार पनि गरे । यसक्रममा दुई पटक गर्भपतन समेत भयो
० तपाईमाथि के कस्तो खालको हिंसा गरे गुप्ताले ?
विहे गरेर आए लगत्तैदेखि दाइजोको निहुँमा सताउन थाले । उनले स्कोर्पियो गाडी मागेका थिए । दाइजोमा स्कोर्पियो गाडी नदिएको भन्दै हिंसा गर्न थाले । यो देशको कानून मन्त्री भइसकेको मान्छे, मैले उनीसंग धेरैपटक अनुनय गरें ।
यस्तो नगर्नुस्, तपाई त समाजको प्रतिष्ठित मान्छे हो, अरुलाई दाइजो नलिन आग्रह गर्नुपर्नेमा तपाई आफैं ममाथि यस्तो किन गर्नुहुन्छ भनें । तर उनले ममाथि धेरै ज्यादति गरे । मलाई उनले अप्राकृतिक मैथुन गर्न पनि बाध्य पारे । एक प्रकारले भन्ने हो भने मलाई उनले पटक पटक बलात्कार पनि गरे । यसक्रममा दुई पटक गर्भपतन समेत भयो । मैले जति यातना यो बीचमा भोगें, त्यो भनेर साध्य छैन । तर, पनि मैले मेरो घर–परिवार बिग्रिन नदिन धेरै प्रयास गरें ।
० तपाईहरूको विहे भएको त निकै वर्ष भइसक्यो होला, अहिलेसम्म किन चुपचाप रहनुभयो त ?
हाम्रो बीचमा विहे भएको सात वर्ष पुग्यो । मेरो माइती भारतमा हो । म नेपाली कमैमात्र बुझ्छु, बोल्न पनि गाह्रो पर्छ । मैले मेरो पीडा सुनाउने ठाउँ पनि पाइँन । घर पक्षका सबैले दाइजोका लागि मलाई नै यातना दिने, सताउने र दुव्र्यववहार गर्ने गरे । विहे लगत्तैदेखि उनीहरूले स्कोर्पियो गाडी मागेका थिए । ममाथि लगातार कुटपिट भयो । दुई पटक गर्भपतन भयो । पेटको बच्चा जोगाउन मैले धेरै प्रयास गरें तर सकिन । न्यायका लागि धेरै ठाउँमा गएँ । महिला आयोगमा समेत गएँ तर त्यहाँबाट पनि न्याय नपाएर बाध्य भएपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत मेरो कुरा बाहिर ल्याउनु परेको हो ।
दुई पटक गर्भपतन भयो । पेटको बच्चा जोगाउन मैले धेरै प्रयास गरें तर सकिन । न्यायका लागि धेरै ठाउँमा गएँ ।
० अहिले तपाई कसरी न्यायको लडाई लड्दै हुनुहुन्छ त ?
मलाई चार महिनाअघि बृजेश गुप्ताले घरबाट निकाले । उनले छोडपत्र नदिए मार्छु भने । मारेर तँलाई गायब बनाइदिन्छु, यो देशमा मलाई जेल हाल्न कसैले सक्दैन भने । मलाई धेरै डर लाग्यो । त्यसपछि मैले मेरो दाइ र भाइलाई यो कुरा सुनाएँ । उनीहरूले मलाई छोडपत्र दिन्छु भनेर माइती आऊ भने । मैले पनि मलाई मार्ने भएपछि छोडपत्र दिन्छु, तर एकपटक माइती जान्छु भनें । मलाई अब घर आउन पाउदिनस्, आइस् भने तँलाई मार्छु भनेका छन् । बाहिर बाहिरै बसिरहेकी छु । उनले मलाई मार्न मान्छे खटाएको भन्ने सुनेकी छु ।
० तपाई अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ त ?
मेरो लागि नेपालमा न्याय पाउन निकै गाह्रो छ तर पनि यहाँका पत्रकार र धेरै मान्छेले मेरो पीडा बुझेर सहयोग गरेका छन् । मलाई त उनीहरूले मार्न खोजेका छन् । मलाई पतित बनाउनका लागि बृजेष गुप्ताले घरमा काम गर्ने नोकर लगाएर बलात्कार गराउन पनि खोजे । नोकरबाट पटक पटक दुव्र्यवहार गराएर मलाई चरित्रहीन देखाउन उनले खोजे । राति राति नोकरसंग सुत्न दबाब दिए । तर, मैले नमान्दा ममाथि कुटपिट गरे । हिन्दी फिल्ममा तपाईहरूले एउटा भिलेनले जे गरेको देख्नुहुन्छ, बृजेष गुप्ताले ममाथि त्यही गरेका छन् । अब म उनको चरित्र भण्डाफोर गर्छु र न्यायको लागि लड्छु ।
० यत्रो वर्ष अन्याय सहनु भएछ तर अहिलेसम्म किन कुनै कारवाही हुन सकेन ?
मैले अघिनै भनिसकें, जानुपर्ने ठाउँ जति सबैतिर गएँ । ममाथि भएको अन्यायका बारेमा जानकारी गराएँ । महिला आयोगले एक दुई पटक उनलाई बोलाएको हो । तर, मेरा पति त्यहाँ जानै चाहेनन् । उल्टै मलाई अब त बाँच्दिनस् भनेर धम्की दिए । अहिले पनि तत्काल छोडपत्रको कागजमा सही गरेर ल्याइनस् भने गाडीले किचेर मारिदिन्छु भन्छन् ।
यो देशमा मलाई कसैले छुन सक्दैन भन्छन् । के यो देशमा कानूनभन्दामाथि नेता हुन्छन् ? मेरो यो प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म कसैले दिएको छैन । म अन्याय विरुद्ध लड्न भनेरै काठमाडौंमा आएकी छु । अब मलाई सबै नेपाली जनताले साथ दिनुहोस् भन्ने आग्रह छ । म एउटी पतिव्रता हिन्दू नारी हुँ । मेरो श्रीमान बाहेक अरुसंग कुनै प्रकारको सम्बन्ध राखेकी छैन । तर, मलाई जबर्जस्ती मेरो श्रीमान र उनका परिवारले अरु मान्छे लगाएर बलात्कार गराउने प्रयास समेत गरेका छन् । यो कुरा अब म बाध्य भएर भण्डाफोर गर्छु र उनीहरूको सक्कली अनुहार बाहिर ल्याउछु ।
झ्यालबाट प्रवेश गरी नगद २५ लाख चोरी...
सामाजिक कार्यमा सधै अगाडि बढिरहने छु...सालिक सुवेदि
अबैध सुन सहित सुन ओसारपसारमा संलग्न ब्यक्तिहरु पक्राउ...
जिल्ला प्रशासन कार्याल चितवनमै बिचौलीया गर्नेहरु पक्राउ.....
आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर उत्कृष्ट लक्ष्यभन्दा बढी लक्ष्यको १०२ प्रतिशत राजश्व संकलन...
आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर उत्कृष्ट लक्ष्यभन्दा बढी लक्ष्यको १०२ प्र�